Iinoveli ezi-6 zakudala kunye nezexesha langoku ekusenokwenzeka ukuba sasingazi ukuba zaziyi-epistolary | Uncwadi lwangoku
Iinoveli ezi-6 zakudala kunye nezexesha langoku ekusenokwenzeka ukuba sasingazi ukuba zazizii-epistolary
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Inoveli
Ezinye iinoveli zokubhala
Ewe abo bazifundileyo bebesazi, kodwa ezinye zazo novelas mhlawumbi sibonile okuninzi. Kwimeko nayiphi na into kuvela ukuba bonke epistolary. Makhe sihlolisise izihloko zabo kunye nababhali babo.
1 Ubuhlobo obuyingozi
3 Ubumnyama obuguqukayo
4 I-84 Charing Cross Road
5 Indawo yokuhlala yaseWildfell
Las ubuhlobo yingozi
Isihloko sodidi loncwadi, kuya kubakho bambalwa abangakhange bazibone iinguqulelo zefilimu. Umbhali wayo wayenguye Pierre Choder kubo de I-Laclos, Indoda yomkhosi, ezopolitiko kunye nombhali we-opera librettos. Inoveli yakhe kuphela yayiyile, yapapashwa ngo 1782.
Ubuhlobo obuyingozi yiyo umzobo ogqibeleleyo Eyona ndawo ikhululekileyo ye Ukhanyiso lwaseFrance. Ngohanahaniso lwayo, ubucukubhede, ukufihla amagumbi okulala kunye namabhongo angenanceba abonisa ngqo abalinganiswa bawo, IMarquise de Merteuil kunye neViscount de Valmont. Bobabini ababethandana nabo ngokungathandabuzekiyo basebenzise kakubi uluntu olujikelezileyo. Kwaye ngoonobumba abadibeneyo ababumba inoveli.
Inoveli ye-Epistolary kunye nomzekelo wencopho nayo yenoveli gothic, zakudala zaseIreland bram Isitokhwe Ingxelo yamazwi ahlukeneyo kunye nothando axelela ibali elikhulu lothando kunye neemvakalelo, kunye noloyiko. Yapapashwa ngo 1897.
Ngokuqinisekileyo uStoker akazange ayicinge impembelelo yehlabathi kunye nengunaphakade
owayenencwadi yakhe kunye nomlinganiswa awamdalayo. Amaxesha aliwaka elinanye aqwalaselwe kwakhona kumdlalo bhanyabhanya kwaye adlalwa liwaka kunye nomdlali omnye. Bakhe Iinguqulelo kunye nee-shades azinakubalwa. Kodwa bangaphi abayifundileyo?
UCarmen Martin Gaite (1925-2000) ngomnye wababhali ababalulekileyo nabaphumelele amabhaso kuncwadi lwethu. Kule noveli usibalisela ibali lika USofía Montalvo kunye noMariana León, ababengabahlobo esikolweni.
USofia uyintelekelelo kwaye unengqondo evulekileyo, kodwa ubukho bland umfazi nonina. Nangona kunjalo, Mariana iye yaqaqamba ugqirha wengqondo Ifashoni. Emva kweminyaka engaphezu kwamashumi amathathu, zenzeka ngamabona-ndenzile kwaye inkumbulo yobuhlobo isusa izinto ezininzi kubo.
UMariana ukhumbula indlela uSofía awayewathanda ngayo amazwi yaye wamkhuthaza ukuba abhale. Kwaye uSofía, nangona esoyika yonke into enokuvela xa eqala kuyo, ubhala kwakhona. UMariana ushiya iMadrid kodwa ubhalela uSofía iileta angabinabuganga bakuzithumela. Inoveli libali lemibhalo emibini kodwa, ngaphezulu kwako konke, i ukwakhiwa kwakhona de unayo ubuhlobo.
I-84 Charing Cross Road
UHelene hanff (Philadelphia, 1918-New York, 1997), umbhali ozifundisayo, waqala ukubhala imidlalo, kunye nezikripthi zikamabonakude, iincwadi zabantwana, izincoko zembali nezopolitiko. Uphefumlelwe a ibhayisikobho Kudlala u-Anne Bancroft kunye no-Anthony Hopkins.
Ibali liyalixelela imbalelwano yaqala ngo-1949 ngumbhali osuka eNew York esiya eMarks & Co., ivenkile ethengisa iincwadi e-84 Charing Cross Road, eLondon. Inomdla kunye ne-manic, inenekazi IHanff ubanga umthengisi weencwadi UFrank doel Imiqulu enzima ukuza kwaye iya kuqhubeka nokubhalwa kangangeminyaka engamashumi amabini, ke ukwazana kwithoni yabo phantse kwaba ukusondelelana onothando.
Le noveli yi encinci isacholo evusa indawo ezihlala kuyo iincwadi kunye nevenkile ezigcina iincwadi ebomini bethu.
Umqeshi nguWildfell Hall
Le yinoveli yesibini yencwadi UAnne Brontë. Yapapashwa okokuqala ngefayile ye- 1848 phantsi kwegama elingu-Acton Bell kwaye uthathwa njenge unayo de las Ekuqaleni novelas ababhinqileyo.
Indlu eyonakeleyo ye I-Wildfell iholoEmva kweminyaka emininzi yokungahoywa, iphinde ihlalwe ngumfazi ongaqondakaliyo kunye nonyana wakhe omncinci. Entsha umqeshi -umhlolokazi, ngokucacileyo- ayithathi thuba lide ukuvuka ukungaqiniseki phakathi kwabamelwane babo umlinganiswa irhoxisiwe kwaye akahlali kakhulu, izimvo zakhe ezigqibeleleyo kunye nobuhle bakhe.
Oku kungathandabuzeki kudityaniswa kukunconywa komfama osakhulayo kunye nokungxama. Kodwa umqeshi une elidlulileyo ngaphezulu yoyikekayo kwaye uqhwithela kunokuba kukho okona krokra kubi kunokuthelekelela.
Incwadana ye-Epistolary ebhalwe ngu USamuel Richardson kwaye yapapashwa okokuqala kwi 1740. Ixelela umntu wokuqala ibali lentombazana elungileyo UPamela Andrews kunye nokuthanda kwakhe nokuzimisela ukwala inkosi yakhe, uMnu. B., ozama ukumlukuhla. Okokugqibela, uyakwazi ukumguqula kwaye ubonakalisa ukunyaniseka ngokumcela.
URichardson wamitha Pamela nge injongo ihlalal. Yenzelwe ukufundisa kunye nokonwabisa ngaxeshanye. Namhlanje ingaqwalaselwa njenge mlandeli yeencwadi zokuziphatha kunye uncedo. Kodwa njengoko wayebhalayo, uthotho lweeleta lwaba yimbali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iinoveli ezi-6 zakudala kunye nezexesha langoku ekusenokwenzeka ukuba sasingazi ukuba zazizii-epistolary
Uyilungisa njani inyathelo lakho lwenoveli ngenyathelo
Amabali kunye nehlabathi: Umhlaba ongaqhelekanga, nguJhumpa Lahiri